Caafimaadka - Jiangxi Prototek Imp&Exp Co., Ltd.
Caafimaadka dhijitaalka ah ayaa beddelaya qaabka warshadaha caafimaadka, sida iskaannada, software-ka iyo xalalka mashiinnada gaarka ah iyo agabkuba ay isugu yimaadaan qulqulo shaqo oo cusub. Prototek waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah tignoolajiyada la ansaxiyay iyo agabyo u oggolaanaya shaybaadhka caafimaadka inay galaan socodka shaqo ee dhijitaalka ah ee horumarsan, xawaaraha wadista, hufnaanta iyo saxnaanta calaamado kala duwan oo la gaadhsiiyo bukaanada.
Prototek waxay la shaqeysaa kuwa hormuudka ka ah kuwa sameeya aaladaha caafimaadka iyo ilkaha, kuwa tikniyoolajiyadda bilaabay ee la xiran karo, alaab-qeybiyeyaasha, iyo shaybaarrada cilmi-baarista si loo dardargeliyo wax-soo-saarka degdegga ah iyo si firfircoon loo cabbiro awoodda wax-soo-saarka.
Codsiyada Caadiga ah ee Caafimaadka
Ku takhasusay khadkan 15 sano, Prototek sidoo kale waxay siisaa alaabada dhexdhexaadka ah macaamiisheena. Isticmaalka habka CNC Machining, waxaan soo saari karnaa alaabo caafimaad oo kala duwan oo macaamiishu u baahan yihiin,
Tuubada aluminium ee ilko.
Qaybaha Saxda ah ee Cnc, Alaabta Cnc, Cnc Soo Saaraha Qaybaha Rogsaday, Adeegga Cnc ee jaban, Qaybaha Spindle-ka, Qaybaha Cnc ee Iibka,